Ixabiso lokuThengisa uMxholo | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 7, 2011 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Oku kujongeka ngokukodwa kwintengiso yomxholo. Sahlulelana nge Umxholo weGridi izolo, ukuxoxa ngendlela uhlobo ngalunye lomxholo onokusetyenziswa ngayo ngobuchule. Le infographic ifuna isicwangciso esomeleleyo ngakumbi kuba indlela yokuziphatha kwabafundi iyatshintsha… iya isiba nokuthandabuza ngakumbi kwaye yonga.
Ngayo UAlinean I-infographic: Ukufumana imbuyiselo kutyalo-mali lokuqulathiweyo kufuna ubuchule ngakumbi, inkanuko, kunye nexabiso elijolise kwizicwangciso kunye nezixhobo ukuze ulwe ngempumelelo neFrugalnomics ™ - ukudibanisa, ukuzibandakanya kunye nokuthengisa kolu hlobo lutsha lomthengi.
tags: Alineanuhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisaiziqulatho zomxholoumxholo ojolise kuwoinkanukobuyela kutyalomali lomxholoinani
Ukujonga iKhalenda yakho yesiqulatho